Izindaba - Mayelana ne-ketchup
Amazwe amakhulu akhiqiza usoso katamatisi emhlabeni asatshalaliswa eNyakatho Melika, ogwini lwaseMedithera nasezingxenyeni eziseNingizimu Melika. Ngo-1999, ukucutshungulwa komhlaba wonke kokuvunwa kwamatamatisi, okunamathiselwe kukamatamatisi kukhuphuke ngama-20% kusuka kumathani ayizigidi eziyi-3.14 ngonyaka owedlule kuya kumathani ayizigidi ezingama-3.75, kwafinyelela ezingeni eliphezulu kakhulu emlandweni. Ukutholakala kwempahla eluhlaza kanye nemikhiqizo kudlule okufunwayo, ngakho-ke amazwe amaningi anciphise indawo yokutshala ngo-2000. Umphumela ophelele wezinto zokwenziwa kukamatamatisi okusetshenziswayo emazweni akhiqiza amakhulu ayi-11 ngo-2000 wawungamathani ayizigidi ezingama-22.1, okwakungamaphesenti ayi-9 amaphesenti aphansi kunalokho okurekhodwe ngo-1999. Izwe laseMelika, iTurkey kanye neNtshonalanga yeMedithera lehle ngo-21%, 17% kanye no-8% ngokulandelana. IChile, iSpain, iPortugal, i-Israel kanye namanye amazwe nawo abe nokwehla ekukhiqizeni izinto ezenziwe ngotamatisi ezicutshungulwayo. Ukwanda ngokweqile konyaka owedlule nakho kwenze umkhiqizo omkhulu katamatisi ngo-2000/2001 Umphumela ophelele wethanga likamatamatisi emazweni akhiqizayo (ngaphandle kwase-United States) wehle cishe ngama-20% ngokwesilinganiso, kodwa inani lokuthumela ngaphandle lenyuke ngo-13% uma kuqhathaniswa ngonyaka owedlule, ikakhulukazi wase-Italy, ePortugal naseGrisi.
I-United States ingumkhiqizi nomthengi omkhulu kunabo bonke emhlabeni wemikhiqizo yamatamatisi. Utamatisi wayo osetshenzisiwe usetshenziselwa ukukhiqiza i-ketchup. Ngo-2000, ukwehla kokukhiqizwa kukatamatisi osetshenzisiwe kwakwenzela ukunciphisa ukubalwa kwemikhiqizo yamatamatisi ngonyaka owedlule nokwenyusa amanani entengo acindezelekile abangelwa ukuvalwa kwabalimi beTri Valley, umkhiqizi wayo omkhulu kunayo yonke katamatisi. Ezinyangeni zokuqala eziyi-11 zango-2000, ukuthunyelwa kwemikhiqizo yotamatisi e-US kwehle ngo-1% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo sonyaka odlule, kanti ukuthunyelwa kwemikhiqizo yamatamatisi kwehle ngo-4%. ICanada isengumngenisi ohamba phambili wokungenisa utamatisi neminye imikhiqizo evela e-United States. Ngenxa yokwehla okukhulu kokungeniswa e-Italy, inani lokungeniswa kwemikhiqizo yamatamatisi e-United States lehle ngama-49% kanye nama-43% ngonyaka ka-2000.
Ngo-2006, inani eliphelele lokucubungula utamatisi omusha emhlabeni lalicishe libe amathani ayizigidi ezingama-29, i-United States, i-European Union neChina zibalwa phakathi kwamathathu aphezulu. Ngokombiko wenhlangano yetamatisi yomhlaba, eminyakeni yamuva nje, u-3/4 womkhiqizo ophelele wokucubungula utamatisi emhlabeni usetshenziselwa ukukhiqiza unamathisela utamatisi, futhi umphumela waminyaka yonke wamatamatisi omhlaba angamathani ayizigidi ezi-3.5. I-China, i-Italy, iSpain, iTurkey, i-United States, iPortugal kanye ne-Greece zibalwa ngama-90% wemakethe yokuthumela utamatisi emhlabeni jikelele. Ukusuka ngonyaka we-1999 kuya ku-2005, isabelo se-China sokuthumela i-tomato paste senyuka ukusuka ku-7.7% ukuya ku-30% wemakethe yokuthekelisa ephasini, lokha abanye abakhiqizi bakhombisa ukwehla. I-Italy yehle isuka ku-35% yaya ku-29%, iTurkey isuka ku-12% yaya ku-8%, kanti iGrisi isuka ku-9% yaya ku-5%.
Ukutshalwa, ukucutshungulwa kanye nokuthekelelwa kwamatamatisi eChina kusesimweni sokukhula okuqhubekayo. Ngo-2006, iChina yacubungula amathani ayizigidi ezingu-4.3 katamatisi omusha futhi yakhiqiza cishe amathani ayi-700000 we-tomato paste.
IJUMP MACHINERY (SHANGHAI) LIMITED imikhiqizo emikhulu ingamatamatisi unama, utamatisi ohlutshiwe noma izingcezu eziphukile, unamathisele utamatisi okhonjiwe, utamatisi impuphu, i-lycopene, njll. Utamatisi unamathisele kwiphakeji enkulu ifomu lomkhiqizo oyinhloko, futhi okuqukethwe kwalo okuqinile kuhlukaniswe kwaba ngu-28% - Ama-30% nama-36% - 38%, iningi lawo ligcwele izikhwama ezingama-aseptic ezingama-220. I-10% -12%, i-18% -20%, i-20% -22%, i-22% -24%, i-24% -26% i-tomato sauce igcwaliswe ngetoti le-tinplate, amabhodlela e-PE namabhodlela engilazi.